Xaalad cakirnaan ah oo ka jirta magaalada Dhuusamareeb ee Galgaduud. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Xaalad cakirnaan ah oo ka jirta magaalada Dhuusamareeb ee Galgaduud.
On Aug 29, 2019 449 0
Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusmareeb oo ah xarunta gobolka Galgaduud ayaa ku waramaya in halkaas ay ka jirto xiisad adag, lagana cabsi qabo dagaallo magaalada ku dhexmara ciidamada dowladda ee dhawaan la geeyay halkaas iyo kuwa Suufida.
Khilaaf adag ayaa soo kala dhexgalay malleeshiyaadka Suufida ee Amxaarada gacan saarka la leh iyo dowladda federaalka ee uu hogaamiyo Farmaajo, waxaana gebi ahaanba burburay heshiis ay horey labada dhinac u gaareen.
Maalmihii lasoo dhaafay, dowladda ayaa magaalada Dhuusamareeb geysay boqollaal askari oo ka kooban noocyada kala duwan ee ciidanka, waxaana hadda ay heleen oo loo geeyey gawaari gaashaman iyo saanado milliteri oo aad u badan.
Malleeshiyada Suufida ee uu hogaamiyo Macallin Maxmuud ayaa iyaguna sheegay iney ka go’antahay iney iska difaacana weerar ay sheegeen iney kusoo qaaday dowladda federaalka, waxaana magaalada qeybo kamid ah ku sugan ciidanka Suufida.
Waxaa hadda magaalada ka billowday barakac ay sameyanayaan dadka shacabka ah, oo ka cabsi qaba in lagu kor dagaallamo, lamana oga sida ay ku dambeyn doonto xaaladda jahwareersan ee Dhuusamareeb.